Posted by Gishe Abdi Wako on December 30, 2013
Muddee/December 28, 2013 · Gadaa.com
(TBOJ.de) – Ummatni Oromoo qabsoo hadhaa’aadhaan bilisummaasaa gonfachuuf sirna bittaa Abashaa waliin geggeessu keessatti TBOJ shoora guddaa galmeessaa jira. Sirni bittaa Abisiniya ilmaan Oromoo gabroomfachuudhaaf bara dheeraa hacuuce keessatti araddaasaa irraa buqqisee, qabeenyaa isaa saamee, mirga isaa sarbee, afaan, aadaa fi seenaa isaa awwaalee, ilmaan Oromoo galaanatti akka dhumanu, kan hafan addunyaa irratti akka faca’anu godhee, gariin mana hidhaatti akka dararamanu kaan kaan irbaata rasasa isaa akka ta’anu godhaa jira.
1. Seera hirmaannaa qabeenyaa fi hojii argachuu abbaan hirree mootummaa TPLF-wayyaanee qomoo isaatii fi miseensa dhaaba isaatiif diriirse keessatti carraa hojii fi itti fayyadama qabeenyaa argachuu dhabuudhaan dargaggootni ilmaan Oromoo fi lammiiwwan Itiyoopiyaa biroo ofi jiraachisuuf jedhanii biyya Arabaatti akka nama biyya hinqabnee, lammii Itiyoopiyaa hintaanettis mootummaan Itiyoopiyaa lakkaa’ee reebichaan lubbuunsaani biyya Arabaatti darbeef bulchiinsa mootummaa wayyaanee ni balaaleffanna.
2. Yeroo ammaa ilmaan Oromoo shororkeessitoota jedhamanii mana isaaniitii dirqiin fuudhamanii mana hidhaa wayyaaneetti reebichaan du’anii reeffi isaanii mana isaaniitti ergamaa jira. Barattootni Oromoo mooraa universiitii adda addaa keessatti rasaasa wayyaaneetiin du’aa jiru. Lubbuun lammiiwwan keenyaa kun sababa qabsoo bilisummaa uummata Oromoof darbaa jira. Kanaafuu nu miseensotni TBOJ qabsoo isaanii kana galmaan ga’uudhaaf kutannoodhaan itti fufna.
3. Qabsoo bilisummaa Oromootiif jedhanii beektotni, dargaggootnii fi abbootiin Oromoo mana hidhaa bulchiinsa wayyaaneetti dararaman haal-duree tokko malee akka hiikamanu cimsinee ni gaafanna.
4. Uummatni Oromoo mirga amantii isaanii sarbame gaafachuudhaaf
hiriira nagaa magaalaa Finfinnee fi Arsii keessatti geggeessaniif rasaasa loltuu wayyaaneetiin lubbuu isaanii dhabaniiru. Gocha farra mirga namummaa kanaaf mootummaan Itiyoopiyaa itti gaafatamaadha.
5. Rakkina Saba kenya furuuf Qabsoo bifa kam iyyu geggessuun miga kenya fi dirqama lammumma kenya hubachu dhaan har’aas Qabsaa’oota Bilisummaa Oromoo walhubanno fi waligalteen gara tokkumatti akka dhuufani fi qabsoo jalqabame fixaan akka baasnu waamicha kenya kabajaan dabarsina.
6. TBOJn Jaarmoole QBO fi bu’a isaani argamsiisan kabajuudhaan ijaarsa bilisa ta’e bilisummaa uummata Oromootiif qabsa’aa kan jiru ta’uusaa hubannee seera ittiin bulmaata keenya kora kana irratti ragga’ee fi murteewwan kennaman hundaa sagalee guutuudhaan ni deggerra.
← Yuunivarsiittii Hawaasaatti barattootni Civil Engineering waggaa shanaffaa sagalee diddaa dhageessisaa jiran
Norway to Co-Chair Human Rights and Democracy Sub Group in Ethiopia with the European Union →